Trafika andramena – Famotsiam-bola: misy raharaha hafa koa anenjehana an’ilay mpandraharaha malaza | NewsMada
Trafika andramena – Famotsiam-bola: misy raharaha hafa koa anenjehana an’ilay mpandraharaha malaza
Nahazo tatitra avy any amin’ny olona tsy nitonona anarana ny Bianco, mikasika ny ahiahy kolikoly nataon’ny mpandraharaha iray, malaza any Toamasina, efa naiditra am-ponja any Tsiafahy amin’izao fotoana izao. Ao anatin’izany raharaha hafa maha voarohirohy azy izany, ny fanaovana trafikana andramena sy ny famotsiam-bola, nanomboka ny taona 2014. Manodidina ny anjatony tapitrisa ariary ny famotsiam-bola nataony avy amin’ny fanondranana an-tsokosoko andramena nakany ivelany. Nisy olona roa hafa nanampy ity mpandraharaha ity tamin’izany. Nalefan’ny Bianco tany amin’ny Fitsarana manokana miady amin’ny kolikoly (Pac) ny antontan- taratasy taorian’ny fanadihadiana nataony.
Tsiahivina fa efa namoahan’ny Bianco didy fampisamborana ity mpandraharaha ity, ny taona 2017 sy ny olona roa hafa mianadahy. Tany ivelany izy tamin’izany fotoana izany. Notsenain’ny mpomba azy tamin’ny fomba manetriketrika tany Toamasina izy, ny taona 2018.
Nosamborina izy tamin’ity taona 2019 ity teto Antananarivo teny Ivandry.
Tsiahivina fa anisan’ny nirotsaka kandida ho solombavambahoaka koa ity mpandraharaha avy any Toamasina ity. Araka ny fanazavan’ny filohan’ny Ceni, afaka mirotsaka foana izy ireny na manana raharaham-pitsarana aza. Saingy mandray fepetra hanoloan’ny lisitra faharoa azy kosa ny filohan’ny Antenimiera, raha toa ka lany depiote izy ireo, nefa voaheloky ny fitsarana. Maromaro ny kandidà depiote toa azy, ary manana raharaham-pitsarana.